सिकार गरेर कसरी हुन्छ ढोरपाटनमा वन्यजन्तुको संरक्षण ? — Paschimnews.com News From Nepal
सिकार गरेर कसरी हुन्छ ढोरपाटनमा वन्यजन्तुको संरक्षण ?
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७५/९/२२ गते
ढोरपाटनमा शरद् र वसन्त ऋतुमा सिकार खेल्ने गरिन्छ। यो आर्थिक वर्षको शरद् (असोज-मंसिर) मा सिकार भएका दशवटा नाउर र छवटा झारलमध्ये चार रुसी सिकारीले आठवटा नाउर तथा चारवटा झारलको सिङ आफ्नो देश लगेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले जनाएको छ।
बाँकी सिकारीले आफ्नो आखेटोपहार स्वदेश लैजान अनुमति लिने प्रक्रिया थालेका छ‍न्। ढोरपाटन रुस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, क्यानडा, बेल्जियम लगायतका देशका ट्रफी सिकारका सौखिन व्यक्तिहरूमाझ प्रख्यात छ।
ट्रफी सिकारीहरूले नेपालको ढोरपाटनलाई जीवनमा एक पटक पुग्नै पर्ने गन्तव्य मान्न थालेका छन्। सिकारीको सङ्ख्या बढेका कारण ढोरपाटन सिकार आरक्षको कमाइमा पनि वृद्धि भएको बताइन्छ।
पोहर सिकार आरक्षले नाउर तथा झारलको सिकारबाट ५९ लाख ७५ हजार सात सय रुपैयाँ कमाएको थियो। यो वर्ष सिकार खुलेको पहिलो ऋतुमा कुल एक करोड आठ लाख ५७ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले जनाएको छ।
उनी भन्छिन्, “हामीले वन्यजन्तुको वासस्थानमा गस्ती गर्ने गरेका छौँ। त्यसले संरक्षणमा सहयोग पुगेको छ।”
यहाँ नाम चलेका सिकारीहरू आउने गरेका छन्। ढोरपाटन आरक्षले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २० जना सिकारीहरू ढोरपाटन आएका थिए भने यो वर्ष त्यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ।
सबैको ध्येय एउटै हुन्छ – ‘हिमाली ट्रफी’ अर्थात् आखेटोपहार लैजाने। ट्रफी सिकारीहरू हिमाली क्षेत्रमा सिकार खेल्न सफल हुनुलाई ‘हिमाली ट्रफी’ जितेको मान्ने गर्छन्।
तर नेपाली सिकारीको सङ्ख्या भने शून्यप्राय: रहने गरेको छ। सिकारका लागि बोलपत्र आह्वान भएपछि सबैभन्दा धेरै रकम तिर्न तयार व्यक्ति वा समूहलाई सिकार खेल्ने अनुमति दिइन्छ।
‘हिमाली ट्रफी’ सिकार महँगो हुने भएकोले नेपालीहरूले नाउर वा झारल सिकार गर्न चासो देखाएको पाइँदैन। ट्रफी सिकारको क्रममा सिकारीले नाउर र झारलको सिङ तथा छालाका अनुमति पाएपछि आफूसँगै लैजान पाउँछन्।
त्यसपछि सन् १९८७ देखि आरक्षलाई सिकारीहरूका लागि खुला गरियो। सिकारीहरूका लागि खोलिएपछि ढोरपाटनमा प्राय: रुस र जर्मनीका सिकारीहरू आउने गरेका छन्।
सिकार आरक्षले ख्याति कमाउन थालेपछि अमेरिका र युरोपका अन्य देशबाट पनि सिकारीहरू आउने क्रम बढेको छ।
ढोरपाटनमा प्रत्येक वर्ष दुई ऋतुमा सिकार गर्न पाइन्छ। सिकारका लागि २० वटा नाउर र ११ वटा झारल छुट्याउने गरिएको छ ।
केही सिकारीले आखेटोपहार घाममा सुकाएर आफूसँगै र केहीले कम्पनीमार्फत् पछि लैजाने गरेका छन्। भौगोलिक रूपमा अतिविकट क्षेत्र रहेकाले सिकारका लागि आउने अधिकांश पर्यटकहरू हेलिकप्टर चार्टर गर्ने गरेका छन्।
बयालीस वर्षीय उनले पढाइलाई बीचमै छोडेर १७ वर्षअघि त्यो काम थालेका हुन्। रुकुम जिल्ला मईकोट पेल्मा स्थायी घर भएका उनी धेरै पटक आरक्ष पुगिसके। उनका अनुसार दुई ऋतुमा सिकारीहरूलाई सघाएपछि उनको आम्दानी झन्डै आठ लाख रुपैयाँ हुन्छ।
उनी सन् २०१४ मा रुसी सिकारीसहित ढोरपाटन पुगेको बेला भएको एउटा घटना बिर्सन सक्दैनन्। उनका अनुसार पैँतालीस सय मिटरभन्दा माथि पुगिसकेपछि रातको ९ बजेपछि अचानक हिउँ पर्न थाल्यो ।
पुन भन्छन्, “लगातार हिउँ परेपछि त्रिपाल नै पुरियो। सबैजना आत्तिए। आफू आत्तिएको भए पनि साहसी सिकारीले मात्र सिकार गर्न सक्छ भनेर सबैलाई सम्झाएँ।”
“त्यो सबैभन्दा डरलाग्दो रात थियो। जीवनकै अन्तिम समय जस्तो लाग्यो।”